Ogaden News Agency (ONA) – Mudaaharaadyo Kadhacay Falasdhiin oo Khasaare Gaystay.
Mudaaharaadyo Kadhacay Falasdhiin oo Khasaare Gaystay.
Posted by ONA Admin	/ December 8, 2017
Shalay oo Jimce ahayd ayay magaalooyinka waaweyn ee dhulka Falastiin ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo Maraykanka iyo Israel, mudaharaadyadan iyo dhagaxtuurkan ayaa looga jawaabayay go’aankii uu Maraykanku ugu aqoonsaday magaalada Qudus caasimada Israel.
Hal qof ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay in ka badan 50 qof, banaanbaxyadan ka dhacay shalay daanta Galbeed sida magaalooyinka Ramallah, Bethlehem, Qudus iyo Marinka Gaza. Ciidamada Israel ayaa rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday banaanbaxayaasha.
Falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqay sadex maalmood oo mudaharaad ah wallow aan wali la aqoon inta uu sii socon doono kacdoonka. Xamaas ayaa shalay ku dhawaaqday in la bilaabo kacdoon cusub oo looga soo horjeedo Maraykanka iyo Israel, waxaana dhaliilo badan loo jeedinayaa maamulka Falastiin ee uu hogaamiyo Madaxweyne Maxamuud Cabaas.
Maxamuud Cabaas ayaa isagu wafdi uu hogaaminayo Khamiistii u dhoofay magaalada Camaan ee caasimada dalka Urdun (Jordan) halkaasi oo ay wadahadalo albaabada u xidhan yihiin kula yeeshay Boqorka dalkaasi Cabdallah.